Wararka - Rakibidda bilowga iyo dayactirka joogtada ah
Ku rakibida bilowga iyo dayactirka joogtada ah
Qalabka Meelmarinta: marka hore shidaal ku nadiifi qalabka dhismaha iyo wadista dibedda. Nadiifinta ka dib, hubi in darawalku rogrogmi karo iyo in kale; markaad rakibineysid, mari dufanka garaafka ee udhaxeeya taarikada khilaafaadka ee xajmiga xajinta, oo saliid dabiici ah mari qeybta murqaha dunta leh; biloowga ayaa lagu rakibay mishiinka, masaafada udhaxeysa wejiga dhamaadka qalabka wax lagu wado iyo diyaaradda wiishku waa 3 5 mm waa ku habboon tahay in la hubiyo in geerka si sax ah loo mesh
Dayactirka Mashruuca: Inta lagu gudajiro howsha bilowga mashiinka, bilowgu waa inuu batteriga ka soo saaraa 344 ~ 400Ah koronto. Sidaa darteed, si looga hortago batteriga inuu ku sii socdo ama waxyeelo, waqtiga bilowgu waa inuusan ka badnaan 5s. Xilliga jiilaalka, way fududahay in la bilaabo dhib si loo bilaabo. Waqtiyada badan ee bilowgu waa inaysan dheereyn, oo muddooyinka ku habboon waa in loo daayaa bilow kasta.
Kormeerka Guul darrada: Bilowgu inta badan wuxuu leeyahay guuldarrooyin iyo ifafaalo aan rogrogmi karin ama qunyar u beddeli karin. Xaaladdan oo kale, hubi dhinacyada soo socda:
1. Bateriga ma laha koronto ama korantadu way daciif tahay, markaa bilowgu ma rogi karo ama si tartiib ah uma beddeli karo.
2. Mawduuca bilowgu waa dabacsan yahay ama waa dansan yahay, oo biiyuhu ama xayeysiiyaha xayeysiintu wuu fashilmayaa.
3. Burushku wuu daalay ama dusha burushku sax ma ahan, guguna wuu daciif yahay, taasoo ka dhalanaysa xiriir liita saxeexa.
4. Gariiradda xiisaha leh ama gariiradda armature waa wareegsan yihiin ama la jaray.
5. Toosiyaha waa la khalday oo xaashida mica ayaa soo baxaysa, taasoo keenaysa xiriir liita oo u dhexeeya burushka iyo hagaajiyaha.
Maalmahan badeecadeenu waxay iibinaysaa dhammaanba gudaha iyo dibaddaba mahadnaqa macaamiisha joogtada ah iyo kuwa cusubba. Waxaan bixinaa wax soo saar tayo sare leh iyo qiimo tartan, soo dhaweyn macaamiisha joogtada ah iyo kuwa cusub ee nala shaqeeya!
Annaga oo la kulanay muhiimadda mowjadaha caalamiga ah ee is-dhexgalka dhaqaalaha, waxaan ku kalsoonahay wax soosaarkeena tayada sare leh oo si daacadnimo leh ugu adeegnaa dhammaan macaamiisheenna waxaanna rajeynaynaa inaan kula shaqeyn doonno abuurno mustaqbal ifaya.
Shirkadeenu waxay leedahay xoog badan waxayna leedahay nidaam shabakad iib ah oo joogto ah. Waxaan jeclaan lahayn inaan la dhisno xiriir ganacsi oo hagaagsan dhammaan macaamiisha gudaha iyo dibaddaba iyadoo lagu saleynayo waxtarka labada dhinac.